ड्रग्सबारे छलफल गरिने ह्वाट्सएप ग्रुपकी एडमिन थिइन् दीपिका ! ग्रुपमा अरु को–को थिए ? – Dcnepal
प्रकाशित : २०७७ असोज ९ गते १६:४१
मुम्बइ। ड्रग्स विवादमा फसेकी बलिउड अभिनेत्री दीपिका पादुकोणको बारेमा अर्को सनसनीपूर्ण खुलासा भएको छ । जानकारीअनुसार दीपिका त्यो ह्वाट्सएप ग्रुपकी एडमिन थिइन् जुन ग्रुपमा ड्रग्सबारे कुरा हुन्थ्यो र चाहिनेले आफूलाई चाहिएकोजति माग गर्थे । स्वयं दीपिकाले २०१७ मा त्यो ग्रुपमै ड्रग्सको माग गरेकी थिइन् । बताइएअनुसार त्यो ग्रुपमा जया शाह र करिश्मा प्रकाश पनि थिए । यस्तोमा अब दीपिका झनै कठिनाइमा फस्न सक्छिन् ।
एनसीबीले शनिबार दीपिकालाई सोधपुछको लागि बोलाएको छ । क्वान कम्पनीकी म्यानेजर करिश्मा प्रकाशसँग भने शुक्रबार नै सोधपुछ गरिएको छ । यही बीचमा ड्रग्सबारे चर्चा हुने ग्रुपकी एडमिन नै दीपिका भएको खुलासा हुनुने कैयौं प्रश्न उठाएको छ । ग्रुपमा अरु को-को थिए भन्ने अहिले खुलासा गरिएको छैन । यसले बलिउडका चर्चित अभिनेत्रीहरु यो केसमा फसेको मात्र नभइ उनीहरुको सक्रिय भूमिका भएको देखाएको छ । यो खुलासासँगै एनसीबीले दीपिकामाथि झनै कडाइका साथ अनुसन्धान गर्न सक्छ ।